Ady eo amin’i Espaina sy ny Fanjakana Britanika noho i Gibraltar ? Milamìna ry Tiana a! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2017 14:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, 日本語, Español
Ny Vatolampin'i Gibraltar hita hatraty amin'ny faritra espainola avy aty La Línea de la Concepción. Saripikan'i Mihael Grmek ho an'ny Wikimedia Commons, lisansa CC BY-SA 3.0
[Nivoaka tamin'ny 6 avrily ny lahatsoratra ôrizinaly tamin'ny teny espaniola]
35 taona lasa izay tamin'ity herinandro ity, nisy vehivavy praiminisitra iray hafa nandefa tafika any ambadiky ny faravodilanitra hiaro ny fahafahan'ny vondron'olona britanika vitsy hifanandrina amin'ny firenena iray miteny iray espaniola. Ary tena matoky mihitsy aho fa hanao vahaolana mitovy amin'izany ny PM-ntsika amin'izao fotoana izao hiara-dalana amin'ny mponin'i Gibraltar.
Avy amin'izay tenin'i Michael Howard, lehiben'ny Mpandala ny Nentim-Paharazana, andro vitsivitsy lasa izay no nandeha fifandirana masiaka indrindra misy eo amin'i Espaina sy ny Fanjakana Britanika tao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny resaka Vatolampin'i Gibraltar.
Fa inona moa i Gibraltar ? Zaratany bitika iray tsara toerana ara-paikady eo amin'ny fidirana mankao amin'ny ranomasina Mediteranea, bodoin'ny Anglisy nandritra ny Adim-Pandovan'i Espaina talohan'ny nanomezana azy ho an'i Bretaina tamin'ny alalan'ny dinan'i Utrecht, tamin'ny taonjato faha-18.
Zara raha manana mponina miisa 33 000 i Gibraltar, mitovy mihitsy i García sy i Smith, toy ny te-hifandramatra hatrany amin'izay fikasan'ny manampahefana espaniola hanao fifampiraharahana momba azy.
Amin'ny maha-zaratany ampitan-dranomasina azy, dia manana tombondahiny tanteraraka izy ao anivon'ny Vondrona Eoropeana, amin'ny tsy fandoavana hetra, fadin-tseranana ary fitsipika sasantsasany. Nefa na dia eo aza ny vato bevata nataon'ny Gibraltariana hotazonina eo anivon'ny Vondrona, dia tsy manana safidy i Gibraltar : koa satria tsipahin'ny mponina ao aminy tanteraka ny hiaraka amin'i Espaina ary tafiditra amin'izany ny hoe samy manana fiandrianana ao ny firenena roa tonta, dia tsy misy na inona na inona azo atao afa-tsy ny mandao ny Vondrona Eoropeana miaraka amin'i Fanjakana Mitambatra.
Andro vitsivitsy lasa izay, nametraka ireo tondrozotra eo amin'ny fanjakana mpikambana mivoaka avy amin'ny fifanarahana momba ny Brexit ny Vaomiera Eoropeana, ary mivoaka mazava avy ao fa tsy azo ampiharina amin'i Gibraltar raha tsy misy fankatoavana avy amin'i Espaina izay fifanarahana ifanaovan'ny Vondrona Eoropeana sy ny Fanjakana Mitambatra, lasa nahazo ny vato tsy azo ivalozana noho izany i Espaina.
Naharomotra ireo politisiana britanika avy amin'ny mpandala ny nentin-drazana sasantsasany izany fifanarahana izany. Ankoatra an'i Michael Howard izay efa voatonana etsy ambony, dia eo ihany koa hafa toa an'i Boris Johnson,Minisitra Britanika misahana ny Raharaham-bahiny, izay niampanga an'i ‘Espaina ho nanao “fanerena tsy azo ekena momba ny hoavin'i Gibraltar eo amin'ny fifanarahana momba ny Brexit“, na i Michael Fallon, misahana ny fiarovana, izay naneho ny fikasany hiaro an'i Gibraltar “hatrany amin'ny fetra farany indrindra”. Na ny minisitra voalohany misahana an'i Gibraltar, Fabián Picardo, izay nilaza tamin'ny alatsinainy : “ny miady varotra ny [Brexit] aminay, dia ny mamela an'i Espaina hitondra tena tahaka ny besandry (…) miharihary koa izany fa fanafihana tsy ankiato ataon'ny Espaniola”. Namehy ny ex-commandant Christopher J. Parry :
Tokony hanatsoaka avy amin'ny tantara i Espaina fa tsy ilaina ny mifanandrina aminay ary azonay atao tsara ny manamena ny volombavan'ny mpanjakan'i Espaina
Mbola nanosika lavidavitra kokoa aza ny famoaham-baovao tia manaitaitra sy manala baraka. Niteraka esoeso maro avy amin'ny mpiserasera ny lohateny lehibe tao amin'ny gazety Sun :
Atsangano ny señores-nareo! hoy ny hiakan'i Sun tamin'ny fanentanana haha-britanika tanteraka an'i Gibraltar.
*PS : Mitentina 15 £ ny manao vakansy ao Espaina ao amin'ny “gazety” androany.
Fa tsy nahafa-po an'i Kelvin Mackenzie mpanao matoandahatsoratra namoaka lahatsoratra iray nilazany ny Espainola ho “mpimamo” sy “mpanao amin'ny biby” izany alohan'ny nanolorany hevitra famaizana mampitokelaka isan-karazany, ka anisan'izany ny fanaovana ankivy an'i Espaina amin'ny fizahan-tany, ny fanakatonana ny faritr'habakabaka amin'ny espainiola (manadino fa ao anatin'ny vondrona iray anie ny Iberia sy ny British Airways) na ny fandroahana ireo Espaniola miisa 125.000 miasa ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (manadino indray fa efa manakaiky ny 240.000 ny Britanika monina any Espaina). Faranan'i Mackenzie amin'ny tsonga-teny mahamangana avy amin'ny filoha Reagan hoe :
Misy soratra manao toy izao eo amin'ny biraon'i Reagan hoe : “Raha tazoninao ny baolinany, dia hanaraka ny fony sy ny fanahiny”.
Ny baolina dia ny tataviany.
Tsy mbola naneho hevitra amin'ity fibolisarana mitady hihantsy ady ity ny manampahefana espaniola, izay mampiasa hatrany an'i Gibraltar ho fanodinan-dresaka amin'ny raharaha manan-danja hafa, ary tamin'ny alalan'ny fanarabiana no nandraisan'ny praiminisitra Teresa May ity raharaha ity.
Ary tamin'ny alalan'ny hatsikana ihany koa no nanaovan'ny mpiserasera amin'ny firenena roa tonta izany, izay maneho ny hantsana misy eo amin'ny politisina sasantsasany sy ny olompirenena. Vavolombelon'izany ny fitsapan-kevitra nataon'ny Huffington Post teny espaniola tamin'ny fanontaniana hoe “Vonona ve ianao ny hirotsaka ao amin'ny tafika hiadiana an'i Gibraltar ?” ka hatramin'izao dia 100 % ny fandavana azony.
Ankoatra ireo tena vitsy naningana, tamin'ny fampihomehezana kokoa no nandraisan'ny mpisera Twitter avy amin'ny firenena roa tonta ny raharaha.
Inona no itadiavana an'i Gibraltar, ny mivoaka amin'ny rond-point mitondra ankavanana aza efa tsy haintsika koa vao maika ny amin'ny ilany !!!
Tsy maintsy angonina daholo ny tsara rehetra hanaovana ny ady an-dranomasina an'i Gibraltar.
- Ka ahoana koa no ahatongavana any Gibraltar ?
– Efa niteny taminao aho fa tonga izany raha ny ankizy no mitondra
– Ary fanampin'izany ary tsy misy ny tambajotra (réseau).
Afaka miady an'i Gibraltar i Espaina sy i ‘Angletera fa tsy maintsy amin'ny sambolay tamin'ny taonjato faha-17 avokoa no hanaovana ny ady.
If I lived in Gibraltar and was given the option of joining Spain or staying part of UK, I'd choose Spain for the weather #brexit #gibraltar
Raha nonina tany Gibraltar aho ka nomena safidy na hanatevina an'i Espaina na hijanona ho anisan'i Fanjakana Mitambatra, dia ho Espaina no ho nofidiako noho ny toetany.
Teto Espaina aho 24 ora izao fa tsy mbola nisy ny nandrabiraby ahy noho i Gibraltar. Isa iray. Mandresy.
Angamba ny siokan'i Francois Smit no namerina ny raharaha ho any amin'ny toerana mendrika azy :
Syria : Tsy mihevitra ny hanao hetsika miaramila ny Fanjakana Mitambatra taorian'ny fanafihana tamin'ny etona shimika : saingy handaroka baomba an'i Espaina isika noho i Gibraltar.
6 andro izayAngletera